कसलाइ थाह छ होला र
आखिर यो मन कहाँ कहाँ छ
के के गर्छ यो मनले
यस्को स्वाभाव कस्तो हुन्छ
यस्को पनि प्रकार हुन्छ हुदैन
के के अणुहरु, अनि के प्रमाणुहरु
मिलेर बनेको छ होला यो मन ?
कति आयतन छ होला यो मनको
अनि कति परिधिभित्र फैलावट भएको छ होला
किन सानो खुसीमा ब्रुक ब्रुक उफ्रिन्छ
अनि त्यस्तै सानो दु:ख पर्दा छाती फुलाएर
आखालाइ ओभानो बनाइदिन्छ
आशुले टिलपिल गरेर
त्यसैले मलाइ जान्न मन छ
आखिर यो मन कहाँ छ होला ?
खोज्दै जादा कहिल्यै किताबका पानाहरुमा
त कहिल्यै गाउँघरका छानाहरुमा
कहिल्यै ढिडो र खोलेहरुमा
त कहिल्यै जन्ती र डोलेहरुमा
कहिल्यै रुवस र विलासितामा
त कहिल्यै स्वान्तसु:खायहरुमा
कहिल्यै माघको चम्किलो घाममा
त कहिल्यै जेष्ठ/असारको चन्द्रमाको शितलतामा
भेटिन्छ रे यो मन
तर यिनै कुराबाट तर्सिदै भाग्छ पनि यै मन
त्यसैले मलाइ जान्न मन लाग्यो अब
आखिर यो मन कहाँ छ होला त ?
मेरो मन जहाँ छ !
किन अरु कसैको मन त्यही हुदैन ?
अनि छैन भने तत्व ज्ञान
कुन इन्द्रियबाट अवगत हुन्छ तिनीहरुलाई
मलाइ पनि जन्न मन छ
आखिर मेरो मनको प्रतिबिम्ब अनि
तिम्रो मनको प्रतिछायामा के अन्तर रहेछ त ?
मेरो मनको स्वाभाव
अनि तिम्रो मनको प्रभाव बिच
के अन्तरसंघर्ष रहेछ त ?
अनि मेरो मनका करुणाहरु र
तिम्रो मनका भावनाहरु बिच के अन्तर रहेछ त ?
त्यसैले त मलाइ जान्न मन छ यो मन कहाँ हुन्छ ?
बगैचामा फुलेको गुलाबमा कि
त्यसैको काडा वरिपरि
कि भिरमा फुलेको लालीगुरासमा
कि बगैचामा फुलेका हजारी, सयपत्रीहरुमा
कस्को मन हुन्छ कस्को हुदैन होला
मलाइ जान मन छ
यदि हुन्छ भने यी सबैको मन
मलाइ जान्न मन छ
त्यसैले त जान्न हाम्रो मन छ आखिर कहाँ छ ?
यदि हुन्छ भने
हरेक मान्छेहरुको आफ्नै छुट्टै मन
किन तड्पिन्छन त अरुको मनको पछाडी
कि ठान्छन यी रैतीहरुले
सत्ययुग देखिको आदिम यात्रा
जहाँ मनलाई मनले नै लखेटेर
मनले नै खोजेर ल्याउनु पर्छ
आखिर यस्को मनसाय के हुन्छ र
यति कोमल यो मन दुखाउने
चाह कस्को मनमा अडिएको हुन्छ
आखिर कस्को पो दृष्टिगोचर हुन्छ होला र
कसैको मन बाट आशाहरु तुहाउने
अनि बिश्वासका बाधहरु भत्काउने
प्रतिभाका कोपीलाहरु लत्याउने
म सोच्ने गर्छु
आफ्नै भाइहरुको ज्यान लिन खोज्ने
के ति कौरवहरुको मन थिएन होला र
अनि छातीमा गोली थाप्न तम्सेका
भक्ती थापाहरुको मन थिएन होला र
औंला काटेर दिदै गर्दा
मन दुख्यो होला कि नाइ एकलब्यको
पतिब्रता नारी सितालाइ हरण गर्ने के
रावणको मन थिएन होला त
के सद्दाम हुसेन अनि
चाल्स सोभराजहरुको मन छैन होला त
के छोरा र पत्नीलाइ छोडेर गृहत्याग गरेका
महामानव गौतमबुद्ध को मन नहोला त
यो आश्चर्य का बिच
मलाइ बुझ्न मन छ यो मन कहाँ हुन्छ त ?
सधै अटल रहि हासिरहने
हिमालको मन कस्ले छामेको छ होला
छाम्नेहरुको मनमा पनि कलकल बग्ने हिम नदी जस्तै
भावनाको सङ्लो खोला बग्दो हो कि नाइ
सलल बग्ने हावाको बेगजस्तै
यो मनको पनि गति हुन्छ कि हुदैन होला
आखिर के ले निर्धारण गर्छ यो मनको गतिलाइ
मनहरु अनि मौनता बिच
मनहरु र सम्बन्धको गहिराइमा के सम्बन्ध छ ?
अनि थाहा हुदा हुँदै पनि मन दुख्ने कुरा
किन आखिर यि सम्बन्धहरु
आफ्नो यात्रामा निस्किन्छ्न त
निस्फिक्री साथ हर बिहानीको झुल्को सङै
जस्को साझ फर्किने न कुनै गन्तव्य छ
न कुनै अदिम युगको नेपथ्य यात्राको
नौ महिना गर्भमा बोकेकी आमालाइ
८० बर्षमा बृद्धआश्रम अघि छोड्न आएको छोराको
मन हुन्छ कि हुदैन मलाइ जान्न मन छ
अनि जान्न मन छ त्यस क्षण आमाको मन
र छोराको मन बिच हुने मौन सम्बाद पनि
अनि के का ज्वारभाट फैलिनछन होला
आखिर त्यो मनमा
जब बुबाको पार्थिव शरीरलाई
दागबत्ती दिन हातमा राको बोकेर
छोरा अघि बढ्न खोज्छ
हो मलाइ जान्न मन छ के बोल्छ होला
आखिर उस्को मनको अन्तर ध्वनि
अनि के बोल्छ होला पार्थिव बुबाको शरीरले
क्यान्सरको अन्तिम किमो लिदै गरेका
आयु र भाग्य डाक्टरले रिपोटमा लेखिसकेका
बिरामीको मनमा के खेल्छ होला
अनि मृत्युपत्र लेख्दै गर्ने
डाक्टरको मनमा के कुरा खेल्छ होला
आखिर मन भन्ने कुरा पनि फगत
सम्बेदनाको र भावनाको ठिस्को पो रहेछ
कहिल्यै दुखमा आखाहुदै बग्छ
त कहिल्यै सुखमा धपक्क मुहारको ज्योति
यदि सन्तुष्टिको अणु बाट
मनको प्रमाणुलाइ खुसी मिल्ने भए
किन सन्तोषको श्वास लिन सक्दैन
यी मन बोकेका मान्छेहरु
Posted by Amrit Jaishi at 04:12
नदिलाइ पनि कति रिस उठयो होला
कति थकान लाग्यो होला
त्यो चिसो हिमालदेखि
तराइको गर्मीमा फेरि स्वाया स्वावा गर्दै
शान्त समुन्द्रमा मिसिदा
तर आखिर मौन छ समुन्द्र पनि
ती तमाम नदिहरुको गुनासो सङ
जसरी तिमी मौन छौ
मेरा मनका अबोध चाह हरु सङ
त्यसैले त म पनि मौन छु तिम्रा गुनासाहरु सङ
तिम्रा त धेरै गुनासा छन होला म प्रती
किन मनको भावनामा बाध हाल्न सकेनौ भन्दै
किन निरर्थक प्रेमकुन्जमा बहुलायौ भन्दै
किन समयको सद्भाव बुझ्न सकेनौ भन्दै
किन आफ्नै परिवेश बुझ्न सकेनौ भनेर
तर मेरो कुनै गुनासो छैन तिमी प्रती
जसरी गुनासो पोखेकी थिइनन सिताले
आफ्नै पतिले अग्नि परिक्षा लाग्दा पनि
जसरी गुलाफले गुनासो पोख्दैनन
कहिल्यै आफ्नै मालीहरु सङ
जस्ले अरुको दिल जोड्न
आफ्नै घाँटी निमोठ्दा थिए
हो मलाइ पनि कुनै गुनासो छैन तिमी प्रती
तिमी म सङ रिसाएर बोल्दै नबोल्दा
तिम्रो त्यो मुस्कुनमा
फिक्कापनाको ग्रहण लाग्नै लाग्दा
मेरो मन त झन
एकान्त गन्तव्यहिन यात्रामा
जसरी निस्किन्छन मृगहरु मृगतृष्णाको खोजीमा
जसरी पुर्णिमाको दिन इन्दुलाइ हेर्न
मौन सम्बादमा निस्किन्छन असंख्य प्रेम जोडीहरु
कस्ले बाध्न सकेको छ र यो मनमा गाठो
यादहरु अनि सपनाहरुको
आफ्नै बिबेकको क्षितिजले
त्यसैले त मलाइ कुनै गुनासो छैन
तिमी रिसाएकोमा पनि म प्रती
अनेक गुनासाहरु पोखेर
म भने बेला बेला रनभुल्लमा पर्छु
यी गुनासाहरुको चाङ देखेर
कतै अविश्वास बोकेका त कतै समयको आधार बोकेका
कतै बालापनको बेहोसी बोकेका
त कतै आग्रहको आलाप बोकेका
कतै बेहोसी बोकेका त कतै जिम्मेवारीको बोध बोकेका
कतै प्रतिभावान भ्रमरहरुको प्रतिक्षा बोकेका
त कतै अमृतपानको आशंकाका उब्जिएका
२२ औ शताब्दीका रोमियो र जुलियटका कथाहरुमा
यति गुनासाहरुबिच पनि
मलाइ तिमी प्रती कुनै गुनासो छैन
Posted by Amrit Jaishi at 01:38
सम्बोधन कुन शब्दले गर्ने पहिल्याउनै सकिन किनकी तिमीले आफ्नो अस्तित्व नै त्यसैगरी स्थापित गरेकी छौ मेरो मनमा, न म तिमीलाइ क्षितिज पारिको वा अरु कुनै रैती मान्न सक्छु, न त आफैले सोचेर, सपना बुनेरै तिमीलाइ आफ्नै मान्छे घोषणा गर्न सक्छु ।यो अन्योललाइ एकछिन यतै विश्राम दिदै..... जब तिमी सङका यादहरुको खुत्रुके म फुटाउन थाल्छु । तिम्रो त्यो सदाबहारको हसिलो मुहार, अनि नम्र एवम शिष्ट मिठासपुर्ण बोली, तिम्रो त्यो होचो कद, तर अग्लो अभिमान, तिम्रो तेजिला नयनको तलपट्टीपरेका Dark circle, अनि त्यही Dark circle छोप्ने चस्मा, थेप्छे नाक, सबैले तिमीलाइ तिमी जस्तै बनाएको छ र त तिम्रै खोजीमा म पनि हराएको छु ।
\_अनि पो देखिन्छन तिम्रो निम्ति साचेका कयौ यादहरु अनि कयौं सपना र कल्पनामा गुज्रिएका अनगिन्ती रातहरु तर त्यही रातको अध्यारोमा पनि चन्द्रमाको उज्यालो झै चम्किदै आएका तिम्रा ........waved you र Hello लेखिएका message हरु । साच्चिकै मलाइ उर्जा प्रदान गरे तिम्रा यी अग्रसरताले । तिम्रा wave र Hello को आदत परेको मेरो मनले कति रात त केवल तिम्रा message को पर्खाइमा कुर्नु पर्यो त्यो मलाइ कहि पनि याद छैन, किनकी पर्खाइ त बिस्तारै आफैले पठाउन थालेको हेल्लो बाट पाएको छुटकारामा रमाउन थालीसकेको थियो । यहि स्वतन्त्रता भित्र फक्रीएको स्वच्छन्दतामै त मेरो प्रेमले मौलाउने मौका पायो ।
प्रिय .....तिमी जीवनको यस्तो मोडमा आएर म सङ जानी नजानी ठोक्कीन पुग्यौ नि मेरो मनमा भुइचालो नै गयो । कहिले काहीँ सान्त्वना स्वरुप आउने तिम्रा message का राहतका प्याकेजहरुले नै मलाइ सम्बन्ध कल्पनामै भए पनि अघि बढाउने उर्जा भने दिइरहयो ।
तिमीलाइ भेटेपछी मलाइ लाग्यो साच्चिकै यो सन्योग पनि अच्चम्मको हुदो रहेछ । संयोगले नै पढ्दै तिमी छुटै बाटो हुँदै त, म छुटै बाटो हुँदै आखिर संयोगले भेटाइ छाड्यो हामीलाइ । भेटाउनु भाग्यको कर्म थियो, तिमीलाइ मन पराउनु मेरो मनको कर्म थियो, हावाको अर्थ चल्नुमै अनि पानीको अर्थ बग्नुमै भए जसरी मेरो अर्थ पनि म तिमीमै समर्पित हुनुमा देख्न थालीसकेको छु । त्यसैले तिमीलाइ भेटेपछी मलाइ लाग्यो केही मान्छे जीवनमा यसरी भेटिन्छन्, भाग्यमा विश्वास नगरी मन मान्दै मान्दैन ! जसरी भाग्यले मलाइ पनि तिमी सङै भेटाइदियो ढिलै भए पनि ।
संसारमा केही कुरा पूर्ण छैन । म पनि आफैमा पनि पूर्ण छैन , तिमीलाइ मैले गरेको यो एकतर्फी प्रेम पनि पुर्ण छैन र यो लेख्दै गरेको प्रेमपत्र पनि पूर्ण छैन। पूर्ण नहुनु मै त यी कुराको सुन्दरता छ । जसरी केही अधुरोपनाले नै पूरा हुने बाटो देखाउँछ । हो म त्यही अधुरोपनामा तिम्रो साथको तृप्तीको खोजीमा छु। म यही पर्खाइमा छु यो अधुरोपनामा तिम्रो अधुरोपन मिलाउने । तिमीसँग नजिक हुनु, अनि टाढा हुनु, कहिल्यै बाटोमा, Library का कुर्सीहरुमा, पार्टीमा हल र डान्सिन फ्लोरहरुमा सँगै हुनु, LT जाँदै गर्दा बाटोमा, होस्टेल फर्किदै गर्दा बाटोमा , कहिलेकाही भिडमा पनि म बिल्कुल एक्लै हुनु, अनि कहिले एक्लै हुदाहुदै पनि भीडमा हुनु, भएर पनि नभएजस्तो लाग्नु, नभएर पनि तिमी आफ्नै भएजस्तो बिश्वास जाग्नु - यी सबै सबैमा म तिमीले गर्ने अदभूत प्रेम भेट्टाउछु , तिम्रा नियमित बेवास्ताहरुमा, तिमीले गर्ने ख्यालठट्टा र जिस्किने बालापनहरुमा, राती अबेर सम्म च्याट गर्दा तिमीले बुनेका हरेक बहानाहरुमा मैले आफैलाइ भ्रममा राखेर पनि प्रेमको तृप्ती लिने गरेको छु ।
कसरी पोखु तिमीलाइ ?
मेरा मनमा लुकेका कुरा छ्न
जति टाढा हुन खोज्छु
उति माया बढ्दै जान्छ झन ।
खै त तिमीले बुझेको ? मेरो मुटु किन चोरेको ?
हो मलाइ पनि सोध्न मन छ तर तिमी प्रत्येक पटक मौन बसीदिन्छौ र पो अन्योलमा छु, अझै तिम्रो मौनता नै स्विकारोक्तिको प्रतिबिम्ब हो वा बेवास्ताको नक्कली घोम्टो मात्र म अन्योलमा छु ।तिमीलाई त्यही गर्ने स्वतन्त्रता छ जुन तिम्रो हृदयले बिगुल फुक्छ तर मलाइ विश्वास छ तिमीले पनि बुझ्नेछौ बिस्तारै मन पराउनु र प्रेम गर्नु बिचको अन्तर र यदि तिमीले भन्यौ भने पनि हामी कहिल्यै एक हुन नसक्ने नदिका किनारा हौ जो सङै भएर पनि सङै हुन्दैन । मलाइ मन्जुर छ तिम्रा हरेक सर्तहरु किनकी यहाँ सवाल प्रेमको छ । यदि तिमीलाइ जान्न मन छ भने सोध्न सक्नेछौ तिम्रा अनेकन प्रश्नहरु म अनुत्तरित भइदिनेछु तर तिमीले देक्न सक्नेछौ मेरो भाव शून्य अनुहारमा लुकेको तिम्रो तस्वीर जुन मेरो नयनमा प्रष्ट सङै देखिने गरि बसेको छ त्यसैले नै दिन्छ यी सबै अनुत्तरित प्रश्नहरुको सहज र स्पष्ट जवाफको प्रतिबिम्ब ।
र अन्तिममा तिम्रो नाममा कविता लेख्दै बिदा हुन्छु
म एक कोरा कागज थिए
हुरी सङै बेगमा हुत्तिदै आयौ र
जिन्दगीका प्रितम यादहरूमा
रङहरूको संयोजन गर्दै
बनाइएका हरेक छायाचित्रमा
तिम्रो रूपण अवतार झल्किन्छ ।
जुन देदीप्यमान छ ।
म आकाशको जूनलाई शब्द चढाएर
तिम्रो शब्दवृष्टि गर्न चाहन्न ।
म त टाढाका मनहरूलाई सँगै पारेर
भविष्यको यात्रा गर्न चाहन्छु ।
एक भाष्य होस् , दुई तरूण मनबीच
जसले सदाकाल जोडिरहनेछ
प्रतिभावान् भ्रमरहरूलाई ।
साइनोको फगत परिभाषामा
तिमी अल्झिदैनौ होला आखिर
तर सबैभन्दा माथि त मेरै हृदय छ
जुन हरेकबेला धड्किराख्छ
तिम्रै मायाका घुनहरू मिसाएर
तिम्रै सम्झनका सुसेली मिसाएर
तिमी भन्छ्यौ भने -
भावनाका गहिरा गल्छिहरूमा हराउला हामी
आनन्दको तारेभिरमा लहरिउला
बनाउला हाम्रै स्वर्ण महल
र जिअौला जिन्दगी
जहाँ हाम्रो आफ्नै बगैँचा हुनेछ
र मग्मगाइरहनेछन् हाम्रो जिन्दगीमा ।
म त बदल्न चाहन्छु
हामी बीचको परिभाषा
जीवनको र जिउनुको
तिम्रो, मेरो र हाम्रो प्रेमको ।
के तिमी तयार छौ ?
निर्झर कविता जस्तै हो ।
न कुनै आदि छ न अन्त्य
चलिरहेछ आफ्नै चित्तको भूगोलमा ।
तिमी वायू हौ
म तिम्रो बेग
तिमी पराधीन हौ
म तिम्रो अधीन
तिमी आधारशीला हौ
म तिम्रो धीर
तिमी प्राण हौ
म तिम्रो वाणी ।
त्यसैले त आऊ
साटौँ एकअर्काको दिल
र कोरौँ निशानी
तिम्रो, मेरो र हाम्रो अमर प्रेमको ।
र जन्माअौँ नयाँ पदचापहरु
ज्ञान र प्रेमका ।
समर्पण र सद्भावका ।
एउटा साइनो दिअौँ
तिम्रो र मेरो ।
उहीँ तिमीलाइ माया गर्ने
अमृत राज जैशी
यहाँ लेखिएका सबै घटना काल्पनिक हुन यदि कसैको वास्तविक जीवनमा मेल खान गएमा त्यो संयोग मात्र हुनेछ ।
Posted by Amrit Jaishi at 08:15
Labels: #Love, #Story, कथा, माया
Location: Dharan 56700, Nepal
प्रेमबारे प्रदिप गिरीका दार्शनिक बिचार
यो विवाह र परिवारजस्ता संस्थासँग म सहमत छैन,’ प्रदीप गिरीले भने, ‘यी निजी सम्पत्तिको उदयसँगै आएका संस्था हुन् । तिनको अन्त्यसँगै यिनको पनि अन्त्य हुन्छ ।’ गिरीले झट्टै माओवादी नेता स्वनाम साथीलाई सम्झाइदिए, जुन अविवाहित नेताले ‘कम्युनिस्टको बिहे हुँदैन’ भनेका थिए । यसपालि एकजना गैरकम्युनिस्ट नेता पनि विवाह संस्थाप्रति असहमत देखिए ।
आखिर के फरक छ विवाह र प्रेममा ? ‘विवाह र प्रेमबीच कुनै सम्बन्ध नै छैन र हुनु पनि हुँदैन,’ गिरीले जोडदार रूपमा आफ्नो परिभाषा पेस गरे, ‘विवाह सामाजिक करार हो, प्रेम हृदयको व्यापार हो । विवाहको सम्बन्ध त निजी सम्पत्तिसँग छ । त्यही निजी सम्पत्तिले नै यो परिवार र विवाहको उत्पत्ति गराएको हो ।’ उनले विवाह नै खत्तम संस्था भएको ठोकुवा गरे र विवाह सम्बन्धलाई आधार मानेर नै मान्छे संयमित र नियन्त्रित हुन बाध्य छ भने । उदारहण दिँदै उनले थपे, ‘बाहिर अरू युवती देख्दा पुरुषको मन चञ्चल हुन्छ । घरकी श्रीमतीले थाहा पाउँछे कि भनेर मात्रै ऊ डराउँछ । मान्छे मोनोगामस (एउटै मात्र पति या पत्नीसँग जीवन बिताउने) होइन, स्वभावैले पोलिगामस (बहुविवाह गर्न रुचाउने) प्राणी हो ।’
प्रदीप गिरी कांग्रेसका एकजना बौद्धिक नेता हुन् । उनी निरन्तर लेखपढ गरिरहन्छन्, अलि भिन्दै जीवनशैली बाँच्छन् । र, कांग्रेस भईकन पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त र दर्शनप्रति गहिरो रुचिसाथ विमर्शमा सहभागी भइरहन्छन् । दार्शनिक चेतनासम्पन्न यी नेता आफूलाई उच्चकोटीको प्रेमी ठान्छन् । प्रेमलाई उनी सम्बन्ध मान्दैनन्, स्वभाव हो भन्छन्– ओशोले झैं । आफूले प्रेम गरेका व्यक्तिलाई उनी कहिल्यै आलोचना गर्दैनन्, आदर र सम्मान गर्छन् । आफ्ना प्रेमिकाहरूप्रति उनको कुनै किसिमको इश्र्या र प्रतिशोध हुँदैन । प्रेमिकाले अरू कुनै पुरुषलाई मन पराउँछिन् भने आफैंले ऊसँग भेटाइदिन चाहन्छन् । ‘प्रेमिकालाई जे मन पर्छ, त्यो उपलब्ध गराइदिँदा मलाई खुसी लाग्छ,’ उनले भने, ‘मान्छे प्रेमिकालाई आफ्ना गाईबस्तु, भेडाबाख्रा वा गाडीजस्तो ठान्छन् । मेरा लागि मेरा प्रेमिका वा पत्नी सम्पत्ति वा वस्तु होइनन्, छुट्टै व्यक्ति हुन् ।’
प्रेम स्वतन्त्रताको अर्को नाम हो, गिरी यसै भन्छन् । उनका अनुसार प्रेम सुरु हुन्छ छनोटबाट, छनोट सुरु हुन्छ स्वतन्त्रताबाट । त्यसबारे उनले भने, ‘जुन सम्बन्धमा तपाईंको स्वतन्त्रता नष्ट हुन्छ, त्यो प्रेम हुँदैन । तपाईं कुनै महिलासँग दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनुभएको छ भने त्यो प्रेम होइन । त्यहाँ स्वतन्त्रता हुँदैन । स्वतन्त्र हुन रोमान्टिक र उच्छृंखल हुनुपर्छ तर मान्छेको रोमान्टिक चाहनालाई विवाहले बाँध्छ । विवाहको आदर्श राम हुन्, प्रेमको आदर्श कृष्ण । मलाई राम रुन्चे लाग्छ, कृष्ण प्रफुल्ल । मेरो प्रेमको आदर्श पनि कृष्ण हुन् ।’
मान्छे जन्मँदैमा र हुर्कंदैमा प्रेम गर्न जान्दैन, प्रेम गर्न जान्न एउटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । हुर्कंदै गर्दा केही थाहा हुन्छ भने त्यो सेक्स हो, आफैं केही हुन्छ भने त्यो वासना हो । प्रेम आफैं हुँदैन । प्रेम भनेको त व्यक्तिको वास्तविकताबाट उठेर व्यक्तित्वमा हुने रूपान्तरण हो । प्रेममय मान्छे कस्तो हुन्छ भन्न गाह्रो हुन्छ, प्रेमविहीन मान्छे कस्तो हुन्छ, बरु चिन्न सजिलो छ ।
कृष्णलाई नै प्रेमको आदर्श मान्नुको खास कारण हो– उनको बन्धनमुक्त जीवनशैली अर्थात् प्रेममा फुक्काफाल । ‘अहिलेसम्म आदर्श प्रेमी भनेर व्याख्या गरिएका लैला–मजनु, रोमियो–जुलियट, राम–सीता आदि सबैको प्रेममा तत्कालीन सामाजिक बन्धनमा बाँधिएको अन्तरकथा छ । तर, राधाकृष्णमा त्यस्तो कुनै बन्धन थिएन । उनीहरूको वियोग पनि स्वेच्छाको वियोग थियो । स्वेच्छाले उनीहरू आ–आफ्नो बाटो लागे, कसैले रोकेन,’ गिरीले भने, ‘प्रेममा दैहिक उपस्थिति वा अनुपस्थिति अर्थहीन हुन्छ । देह अलग हुँदा पनि प्रेम अलग हुँदैन, ज्यान छुट्टिएर बस्दा पनि नछुट्टने प्रेम नै महान् प्रेम हो ।’ गिरीलाई लाग्छ, प्रेमको दैवीय स्वरूप यदि कहीं छ भने त्यो कृष्णमै छ ।
गिरीको परिभाषामा स्त्री–पुरुषको सम्बन्धमात्रै प्रेम हैन । उनलाई लाग्छ, जब पति–पत्नी साथी बन्छन् र आपसमा मित्रताको सम्बन्ध हुन्छ, तबमात्रै त्यहाँ प्रेम हुन्छ । मान्छेले सिनेमा वा उपन्यासमा प्रेम खोज्ने गल्ती गर्छन् । तारा झार्ने झुटो कसम खान्छन् । गिरीलाई भने प्रेम नाप्न, तौलन, हेर्न सकिने कुरा हो भन्ने लाग्दैन, न यसको वैज्ञानिक व्याख्या नै सम्भव छ । ‘प्रेम त्यस्तो बिन्दु हो, जसको कुनै लम्बाइ, चौडाइ नाप्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘प्रेम र जीवनको अर्थ अलग–अलग हुँदैन, प्रेमलाई पूर्णतामा बाँध्नु जीवनलाई पूर्णतामा बाँध्नु हो भने जीवनलाई पूर्णतामा बाँध्नु प्रेमलाई पूर्णतामा बाँध्नु ।’ उनको दृष्टिमा राम्रो प्रेमी हिंसा, घृणा, इश्र्या, मोह र रोगबाट मुक्त हुन्छ । प्रेमलाई सेक्ससँग जोड्नु पनि उनलाई सबैभन्दा गलत लाग्छ । भने, ‘यी सँगै जान सक्छन् तर एक–अर्काका पर्याय होइनन् ।’
हाम्रो समाजमा प्रेमलाई विवाह संस्था र यौन–सम्बन्धको पर्याय ठानेर यसको विकृत परिभाषा दिने गरिएको छ, जसको ठूलो सिकार महिला भएका छन् । गिरीलाई लाग्छ, ‘प्रेममा परेर घरबार छाडेर विद्रोह गर्ने वा विवाह नै नगर्ने महिलाहरू अत्यन्तै उदार चरित्रका हुन्छन् ।’ तर, प्रेम र मानवीय सम्बन्धलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण गलत छ । उनले भने, ‘प्रेम कहिल्यै गलत हुँदैन, असत्य हुँदैन । यो समाजको मूलमै असत्य छ । त्यसैले सच्चा प्रेम विद्रोही देखिन्छ । समाजले चरित्रहीन वा विपथगामी भनेका महिला वा पुरुषमा मैले महान् आत्माको दर्शन गरेको छु । समाज प्रेम होइन बन्धन चाहन्छ र बन्धनलाई प्रोत्साहन दिन्छ ।’ समाजले जसलाई लाञ्छना लगाउँछ, गिरी उनीहरूमा महानता भेट्टाउँछन् । भने, ‘पाठकले पनि पक्कै आफूवरिपरि हेर्दा थाहा पाउनुहुनेछ, सबै लाञ्छित पात्रमा महान् गुणहरू हुन्छन् ।’
गिरीले साँचो अर्थमा महान् मानेका प्रेमीहरू पनि फरकखालका छन्– गान्धी, अब्राहम लिंकन, कृष्णप्रसाद भट्टराई । भट्टराईबारे उनले भने, ‘एकपटक जेलमा छँदा मैले उहाँलाई सोधें– कति स्त्रीसँग तपाईंको सम्बन्ध भयो ? उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरैसँग पो भयो त, म सभामुख छँदा थुप्रै कर्लगर्लसँग पनि गएको छु ।’ किसुनजीले वेश्यागमनको सौन्दर्यात्मक पक्षबारे मलाई बताउनुभयो । उहाँले उनीहरूलाई वेश्याका रूपमा नमानेर प्रेमिकाका रूपमा सम्मान गर्नुभयो । मलाई लाग्यो, प्रेम सम्मानको अर्को नाम हो । अहिले पनि उहाँ आफ्ना बदनाम प्रेमिकाका बारेमा अत्यन्त सम्मानपूर्ण सम्बोधन गर्नुहुन्छ । जुन वेश्याकहाँ उहाँ जानुहुन्थ्यो, पछि लगातार एउटै कहाँ पनि जानुहुन्थ्यो ।’
‘किसुनजीले व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्रेमिकाबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न कहिल्यै रुचाउनुभएन । तर, उहाँको सम्पूर्ण स्वभावमा, उहाँको ठट्टा, निसंगता, वैराग्य, हाँसो हेर्नोस्– कुनै कुण्ठा भएको मान्छे त्यस्तो ठट्टा र रमाइलो गर्न सक्छ ? किसुनजी वेश्यासँग जानुहुन्थ्यो र उनीहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो । कार्यकर्तालाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो र छोराछोरीलाई जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो । तर, अहिलेका नेताहरू कार्यकर्तालाई सम्मान गर्दैनन्, साधनमात्रै बनाउँछन् । वास्तविक अर्थमा प्रेमी नभएकाले नै उनीहरूले समाजमा हिंसा र पाखण्डलाई प्रोत्साहन दिएका छन् । सत्ताभोगीले अलिकति प्रेम गरे, अलिकति उपन्यास पढे, अलिकति कविता पढे, अलिकति संगीत सुने हाम्रो राजनीति सुध्रिने थियो ।’
‘किसुनजी महान् प्रेमी हो । एकपटक जेलमा छँदा मैले किसुनजीलाई सोधें– कति स्त्रीसँग तपाईंको सम्बन्ध भयो ? ‘धेरैसँग पो भयो त, म सभामुख छँदा थुप्रै कर्लगर्लसँग पनि गएको छु,’ किसुनजीले वेश्यागमनको सौन्दर्यात्मक पक्षबारे मलाई भन्नुभयो । उहाँले उनीहरूलाई वेश्याका रूपमा नमानेर प्रेमिकाका रूपमा सम्मान गर्नुभयो । मलाई लाग्यो– प्रेम सम्मानको अर्को नाम हो ।
प्रेम मूलतः सिर्जनात्मक हुन्छ, यो गिरीकै तर्क हो । प्रेम प्रेममात्रै होइन, यसलाई सिर्जनात्मकतासँग जोडिएन भने त्यो बिस्तारै सड्न थाल्छ, यो पनि उनकै तर्क हो । गिरीका अनुसार एक चरणपछि प्रेमले प्रेमको उदात्तीकरण छुनैपर्छ र आफूभन्दा माथि उठ्नैपर्छ । राजनीति पनि प्रेमकै अभिव्यक्ति भएको ठान्छन् उनी । ‘समाज बदल्न हिँडेकाहरू समाजलाई नै प्रेम गर्छन्,’ उनले भने, ‘क्रान्ति गर्नेहरू सबैभन्दा बढी प्रेमी हुनुपर्छ । संसारका सच्चा क्रान्तिकारीहरू सच्चा प्रेमीहरू हुन् ।’
प्रेमले कुनै धर्म वा पेसासँग सम्बन्ध राख्दैन । व्यस्त कारोबारी पनि असल प्रेमी हुन सक्छ । प्रेम मस्तिष्कसँग भन्दा हृदयसँग जोडिन्छ । तर, महिला र पुरुषबीच समाजले फरक–फरक प्रवृत्ति सिकाउँछ । ‘हाम्रो समाजले घरपरिवारमा बाँधिएका सामान्य महिलालाई ज्यादातर स्वार्थी र आत्मकेन्द्री बनाउन सिकाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, त्यहीं कति महिला आदर्शप्रेमी हुन्छन् । पुरुषभन्दा महिलामा नै कैयौं गुणा बढी प्रेम हुन्छ । प्रत्येक किसिमको प्रेममा पुरुषभन्दा महिला बढी प्रफुल्लित हुन्छन् । यो मेरो अनुभव हो । सेक्समा पनि यदि प्रेम छ भने महिलाले बढी आनन्द प्राप्त गर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ । प्रेममा परेपछि प्रत्येक पुरुष डराउन थाल्छ, स्त्रीचाहिँ बलवान् र निडर हुन थाल्छे । पुरुष तर्सन थाल्छ, स्त्री खतरा मोल्न तयार हुन्छे । प्रेम हुनासाथ पुरुषमा स्त्रीका र स्त्रीमा पुरुषका गुण तथा स्वभाव साटिन थाल्छन् । अधिकांश प्रेम गर्ने महिलाले साहसिक निर्णय गरेका छन् ।’
प्रेम सबै रोगको उपचार हो, गिरी यस्तै ठान्छन् । उनका शब्दमा यसलाई सेक्ससँग जोड्नु महामूर्खता हो । मान्छे जन्मँदैमा र हुर्कंदैमा प्रेम गर्न जान्दैन, प्रेम गर्न जान्न एउटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ– उनी यसै भन्छन् । ‘हुर्कंदै गर्दा केही थाहा हुन्छ भने त्यो सेक्स हो, आफैं केही हुन्छ भने त्यो वासना हो,’ उनले भने, ‘प्रेम आफैं हुँदैन । प्रेम भनेको त व्यक्तिको वास्तविकताबाट उठेर व्यक्तित्वमा हुने रूपान्तरण हो । प्रेममय मान्छे कस्तो हुन्छ भन्न गाह्रो हुन्छ, प्रेमविहीन मान्छे कस्तो हुन्छ, बरु चिन्न सजिलो छ– क्रोधित, आक्रोशितलाई परैबाट चिनिन्छ ।’ उनले अहिलेका नेतालाई त्यस्तै प्रेमविहीन भनिदिए ।
कुराकानीक्रममा गिरीले आफ्ना ‘थुप्रै’ प्रेमिका भएको स्वीकारे । प्रेमबारे खुलेर कुरा गरे, दार्शनिक व्याख्या गरे । तर, आफ्नो प्रेममामिला र प्रेमिकाबारे उनी त्यति खुलेनन् । बरु यसो पो भने, ‘म मेरा प्रेमिकाबारे त्यति धेरै बोल्दिनँ । यसले मेरा वैधानिक/अवैधानिक पत्नी वा प्रेमिकाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । यति लेख्नूस्, मलाई स्त्रीबाट अशान्ति छैन । तर, यो पनि बुझ्नूस्– प्रेम भनेको महिलासितको गोप्यकार्यमात्रै हैन ।’ के कुनै दिन प्रदीप गिरीको प्रेमकहानी थाहा दिने सांगोपांगो आत्मकथा आउला ? जीवन जस्तो थियो÷छ, त्यस्तै चित्र आउनेगरी आत्मकथा कहिले लेख्ने ? ‘कसैले आत्मकथाको भूमिकामा लेखेको छ– म गान्धीजस्तो सत्य पनि लेख्न सक्तिनँ, नेहरूजस्तो झुट पनि । म पनि प्रेमका बारेमा आफ्नो उदाहरण दिन चाहन्न । किनभने म पनि न गान्धीजस्तो सत्य लेख्न सक्छु, न जवाहरलाल नेहरूले जस्तो झुट । म झुट बोल्न चाहन्नँ, सत्य बोल्ने हिम्मत पनि गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, म आफ्नाबारे आजै धेरै बोल्दिनँ ।’
यति भनिसकेर गिरीले २०/२१ वर्षको लक्का जवान हुँदाकी आफ्नी एउटी प्रेमिकाको प्रसंग झिके । प्रेमिका र उनी रिक्सामा चढेर कतै घुम्न जाँदै थिए । प्रेमिकाले रिक्सा रोकेर आइसक्रिम किनिन् र एक्लै खान थालिन् । रिक्सा अघि बढिरहेको थियो । केहीबेर पछि गिरीले ‘म पनि खान्छु’ भनेर प्रेमिकाले खाइरहेको आइसक्रिम मागे अनि फ्याँकिदिए । ‘त्यो मलाई असभ्य लाग्यो,’ उनले भने, ‘मैले जे ठीक ठान्छु, उसले त्यही गरोस् भन्ने लाग्थ्यो मलाई । पछि उनीसँग मेरो विछोड भयो । भगवान् मेरा दाहिना भए । किनभने वियोगपछिका मेरा वर्षहरू अत्यन्तै राम्रा भए । त्यही वियोग र वेदनाले मलाई प्रेमबारे सिकाए । अहिलेको मेरो प्रेममा इश्र्या, द्वेष र अधिकारबोध हुँदैन । प्रेमिकाले अरू कसैलाई प्रेम गर्छु भने पनि म गर गर भनिदिन्छु ।’
प्रेम स्वतन्त्रताको अर्को नाम हो । प्रेम सुरु हुन्छ छनोटबाट, छनोट सुरु हुन्छ स्वतन्त्रताबाट । जुन सम्बन्धमा तपाईंको स्वतन्त्रता नष्ट हुन्छ, त्यो प्रेम हुँदैन । तपाईं कुनै महिलासँग दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनुभएको छ भने त्यो प्रेम होइन । त्यहाँ स्वतन्त्रता हुँदैन । स्वतन्त्र हुन रोमान्टिक र उच्छृंखल हुनुपर्छ तर मान्छेको रोमान्टिक चाहनालाई विवाहले बाँध्छ । विवाहको आदर्श राम हुन्, प्रेमको आदर्श कृष्ण । मलाई राम रुन्चे लाग्छ, कृष्ण प्रफुल्ल ।
अन्त्यमा, उनलाई सोधियो– प्रदीप गिरी कस्तो प्रेमी हो त ? गम्भीर भाकामा उनले भने, ‘मलाई यो स्वीकार्न कुनै हिच्किचाहट छैन कि म सामन्ती संस्कारको प्रेमविरोधी परिवेशमा हुर्किएँ । अहिले पनि म पूर्ण प्रेमी हुन सकेको छैन । पूर्ण प्रेमी हुनु भनेको सन्त हुनु हो, सन्त फ्रान्सिसजस्तै । ती सन्तको जिउमा घाउ भयो र कीरा पर्यो । अरूले कीरा निकालौं भन्दा उनले कीरालाई किन मार्ने भनेर सोधे । म उनको यो कथनसँग सहमत छु । मैले आफूलाई सक्दासम्म र बुझ्दासम्म प्रेमले परिष्कृत गर्ने कोसिस गरेको छु । यसर्थ प्रेम मेरो सन्दर्भबिन्दु भएको छ । म कस्तो प्रेमी भनेर आफैं भन्ने कुरा उठ्दैन तर एउटा कुरा अवश्य हो– अचेल म आफूमा द्वेष, घृणा वा प्रतिस्पर्धाको भावना पाउँदिनँ । मेरो विचारमा यस्ता भावनाको अनुपस्थित नै मैले प्रेमको क, ख, ग सिक्दै गरेको प्रमाण हो ।’
प्रस्तुति : संगीतश्रोता
Posted by Amrit Jaishi at 13:16
एक्लोपन र मेरो मन
स्कुलमा गणितमा सिकाए जसरी गुरुहरुले
Suppose .......= x माने झै
ठिक मैले पनि आज
तिमी = आफ्नो मान्छे मानेर
हिसाब गर्न थाले देखि जिन्दगीको
खुसीको सिमानामा हेरेफेर भएको छ
अनिन्द्राले आफ्नो परिधी बढाएको छ
चाहानाको आकाश फैलिएको छ
तिम्रै खोजीमा हिडिरहेको छ
सपनाहरुमा नयाँपन छाएको छ
एकान्तलाइ तिम्रो आगमनले झनै प्रिय बनाएको छ
ओठहरुमा मुस्कान आफै फैलिरहेको छ
आफैमा सुनौलो आभास हुदैछ
कोर्न थालेको छु
कल्पना र चाहानाका रङहरुले तिम्रो अलौकिक तस्वीर
तर यति मात्रै पनि हैन
वास्तविकता भित्र लुकेको के छ भने
तिमी सङ ब्यतित काल्पनिक निकटताले समेत
एउटा सुखद पीडाको आभाष गराइरहन्छ
जुन पिडाको खोजीमा
आज पनि म निरन्तर तिम्रो पछि हिडिरहेछु
तिमीलाई थाहै नदिइ
र सोधिरहेछु आफ्नै अन्योल मनलाइ
'प्रतीक्षा' मा 'अपेक्षा' मिसाएर
पर्खिरहेका मेरा रहरहरु
कतै बिडम्बना सङ ठोक्किएर,
स्वयम् परास्त त हुने हैनन
तर पनि म सुखद पीडाको खोजीमै छु
Posted by Amrit Jaishi at 09:52
ताराहरु र तिमी
उघारिएको आकाश हेरे
टहटह लागेको चम्किलो 'जुन' थियो
अझ आकाश भरी छरिएका
अनगिन्ती टिलपिल गरिरहेका ताराहरु थिए
ताराहरुको बिचमा तिमीलाइ देखे
अनि म चिच्याय
म तिमीलाइ आफुलाइ जति नै माया गर्छु भन्दै
हावा सरर माथी तल गर्दै थियो
हावाले मेरो मनमा अडेको भावना
तिमीलाइ सुनाइदिए जस्तो लाग्यो
अनि पर्दा लगाएर सुर्य उदाउनु पुर्व र
ताराहरु हराए पछि सम्म पनि
कहिले धर्तिको आकाशमा
त कहिले आफ्नो चहानाको आकाशमा
Posted by Amrit Jaishi at 10:19
समयलाइ आजको दुनियाको सबैभन्दा शक्तिशाली अश्र मान्ने म जन्मे सुदुर पश्चिमको पनि बिकट गाउमा सायद मैले नचाहेरै वा येसो भनौ मैले चाहानाको पाठ पढ्न नपाउदै मेरो जन्म भयो , त्यो सन्योग थियो हो यस्तै अरु अरु संयोगले मात्र बनेको रहेछ सायद जीवन त्यसैको अनुभुत गर्दैछु जसरी तपाईं र मलाइ पनि यी शब्दहरुले संयोग जुराए र आज शब्दकै माध्यामबाट भए पनि भेट सम्भव भयो ।
प्रिय ............ सम्बोधन कुन शब्दले गर्ने पहिल्याउनै सकिन किनकी तिमीले आफ्नो अस्तित्व नै त्यसैगरी स्थापित गरेकी छौ मेरो मनमा, न म तिम...